Tronsmart ONYX PRIME, fanadihadiana sy fampisehoana | Vaovao momba ny gadget
Tronsmart ONYX PRIME, fanadihadiana ary fampisehoana
Rafa Rodriguez Ballesteros | 26/12/2021 14:00 | General, hevitra
Mitady écouteur tsy misy finday? Araka ny efa hitanao dia tsy mora izany, noho ny habetsahan'ny safidy eny an-tsena amin'izao fotoana izao. Noho izany, mba hanampiana anao amin'ny asa fitadiavana farany ny écouteur True Wireless ilainao, anio dia mitondra Actualidad Gadget safidy vaovao kokoa noho ny mahaliana, ny Tronsmart ONYX PRIME.
Afaka nanandrana ireo écouteur Tronsmart ireo nandritra ny andro vitsivitsy izahay ary avy eo dia holazainay aminao ny traikefanay amin'ny fampiasana, ny endri-javatra hitanay ary ny vidiny azonao alaina raha voafidy izy ireo.
2 Ity no Tronsmart ONYX PRIME
3 Ny endri-javatra atolotry ny Tronsmart ONYX PRIME
Toy ny fanaonay foana dia asehonay anao ny zava-drehetra izay hita ao anatin'ny boaty ny ONYX PRIME avy amin'i Tronsmart. Toy ny mahazatra, dia afaka milaza ihany koa fa tsy nahita zava-mahagaga. Manana ny anay izahay auriculares, ny raharaha famandrihana, un boky fampianarana mpampiasa ary Cable UBS Type C mba hamenoana ny bateria amin'ny raharaha.
Buy ny Tronsmart ONYX PRIME amin'ny Amazon amin'ny vidiny tsara indrindra
Ho an'ny ambiny dia hitantsika ihany koa paosy maromaro fanampiny fanitsiana ny headset, mba hanana habe telo samy hafa, miaraka amin'ny iray izay mifatotra. Ankoatra izany, manana ihany koa izahay roa hafa "peratra fingotra", amin'ny habe samihafa, izay manampy amin'ny fampifanarahana tsara kokoa ny headset ao anaty sofina.
Ity no Tronsmart ONYX PRIME
Ny Tronsmart ONYX PRIME dia manana endrika "ao anaty sofina", saingy manana ny mampiavaka azy amin'ny famolavolana azy ireo izay nanapa-kevitra ny mpanamboatra vitsivitsy hameno ny écouteur. Tahaka ireo modely maro hafa, ireo écouteur Tronsmart ireo manasongadina ny fonon-tsofina mampiady hevitra izay mijanona ao anatin'ny sofina ary ny asany dia ny manao effet vacuum. Ho an'ity dia hitantsika habe telo samy hafa.
Ny ONYX PRIME koa dia manana iray hafa peratra fingotra fanampiny izay eo amin'ny faran'ny mikrô. Manompo pmba raikitra kokoa ny handset amin'ny sofinay ka tsy afaka mihetsika na mianjera. Fanampiny kely izay mahatonga azy ireo a safidy tsara raha mitady écouteur hiaraka aminao ianao mandritra ny hetsika ara-batana sporty. Fanampiana izay efa hitanay tamin'ny maodely hafa ary rehefa avy nanandrana izany izahay dia afaka manaporofo fa manatanteraka ny iraka nampanaovina azy ireo. Manana koa isika habe telo samy hafa mba ho tonga lafatra ny fitia. Izy ireo ve no notadiavinao? Raiso ny anao Tronsmart ONYX PRIME amin'ny Amazon miaraka amin'ny fandefasana maimaim-poana.
Manana ny headphones a habe matevinaKely amin'ny tanana izy ireo ary indrindra rehefa mitafy azy ireo isika. Fitaovana fanorenana, in plastika manjelanjelatra, ary ny lanja kely ananany dia tsy mahatsikaritra fa mitondra azy ireny isika. Zava-dehibe ho an'ireo izay mampiasa azy ireo mandritra ny ora maro na rehefa manao fanatanjahan-tena.
Ao amin'ny ampahany izay ivelan'ny sofina, eo ambonin'ny famantarana ny orinasa, ny touch control. Afaka miaraka amin'izy ireo isika fehezo ny famerenana mozika, mitsambikina na mandroso na mihemotra, miato na manomboka milalao. Ao amin'io faritra io ihany no ahitantsika a mikrô izay ampiasaina hifehezana ny fanafoanana ny tabataba mavitrika. Ary amin'ny farany ambany dia manana a taratra fahazavana izay milaza amintsika raha mavitrika ny fifandraisana, na ny haavon'ny bateria isaky ny headset.
El chargeur case, izay ipetrahan'ny écouteur amin'ny fiampangana, dia vita amin'ny plastika mainty ihany koa izy io, amin'ity tranga ity miaraka amin'ny famaranana matte. Mifanaraka tsara ny écouteur noho ny os pins magnetized. Ary manolotra izy ireo hatramin'ny fiampangana feno telo fanampiny ka ny fizakan-tena ny ONYX PRIME dia afaka manaraka antsika. Afaka mividy amin'ny Amazon ianao izao Tronsmart ONYX PRIME ny vidiny tsara indrindra.
Ny endri-javatra atolotry ny Tronsmart ONYX PRIME
La fizakan Iray amin'ireo lafin-javatra azontsika heverina ho manan-danja indrindra izy io rehefa manapa-kevitra amin'ny modely iray na iray hafa. Manana reproduction ny nitohy hatramin’ny adiny valo ny mozika isaky ny entana. Y total hatramin'ny 40 ora raha manana ny raharaha fiampangana izahay.
La fifandraisana iray amin'ireo tanjany noho izy ireo manana teknolojia Bluetooth 5.2. Fifandraisana haingana sy mirindra amin'ny fotoana rehetra. Ary misaotra an'i Qualcomm 3040 chip, mahazo kalitaon-peo nohatsaraina izahay izay mahatonga ny traikefa fihainoana ho tsara kokoa.
Isika koa dia manana ny nohatsaraina ny teknolojia True Wireless Stereo Plus. Mahay manara-maso fa mifandanja ny fanjifana ny écouteur roa. Ary mitondra fanatsarana misongadina eo amin'ny fahamarinan'ny fifandraisana izany. Miankina amin'ny Fanafoanana ny tabataba mavitrika noho ny QCC3040 chip manolotra traikefa mpampiasa tena mahafa-po.
La kalitao feo Manolotra mihoatra ny nantenaina izy ireo.
fizakantena hatramin'ny 40 ora tsy mila plug.
famolavolana tonga lafatra amin'ny fanatanjahan-tena.
habe amin'ny vata fampangatsiahana sy écouteur mihoatra ny antonony.
La fingotra fanitsiana Mety ho tsy mahazo aina izany, na dia zava-dehibe aza ny tokony ho izy ny habeny.
Navoaka tamin'ny: Desambra 26 amin'ny 2021
Fanovana farany: Desambra 25 amin'ny 2021
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Tronsmart ONYX PRIME, fanadihadiana ary fampisehoana
Dreame H11 Wet and Dry, famerenana lalina an'ity vacuum / mop ity
Elite 3, safidy mora indrindra an'i Jabra, mitazona kalitao [Famerenana]